A na -eji ndenye ọpụpụ Instagram ugbu a na azụmaahịa niile tozuru etozu na US ọ ga -agakwa mba ụwa n'ọdịnihu dị nso.
Njirimara ndenye ọpụpụ na -enye anyị ohere ịzụta ngwaahịa ozugbo site na ngwa Insta anyị. Site ugbu a gaba, anyị nwere ike idobe iwu anyị ozugbo na Insta mgbe anyị ji mkpado ngwaahịa ọkacha mmasị anyị nyochaa akwụkwọ ahịa.
Dị ka Instagram si kwuo, 130 millions d’utilisateurs cliquent chaque mois sur des posts shoppable, ọ bụghịkwa ihe ijuanya na Instagram etinyela ọrụ ugbu a ” Lelee ” dị maka azụmaahịa niile dị na United States.
Mmụba nke ewu ewu nke “posts nke a na -ere ahịa” gbanwere Insta ngwa ngwa ka ọ bụrụ ikpo okwu e-commerce. Njirimara ndenye ọpụpụ ga -akwado mgbanwe a ugbu a ma melite ahụmịhe onye ọrụ ka ọ dị mma.
Anyị nwere ike kpatụ mkpado ngwaahịa anyị chọrọ wee kwụọ ụgwọ ozugbo na Instagram maka ngwaahịa ahụ. Usoro ịzụ ahịa anyị adịtụbeghị mfe na usoro mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla ọzọ.
Ha agbanweela ụzọ anyị si azụ ahịa ma gbanwee ụzọ ụlọ ọrụ si eji ụlọ ahịa Insta ha..
Maka ndị ọchụnta ego, ike ịgbanwe ndị na -ege ha ntị ngwa ngwa site na ịgagharị naanị na ịzụta ngwaahịa na -enweghị ịhapụ ngwa Instagram na -ebute ọnụ ahịa ahịa na -abawanye.
Ulo oru, nke ndị na -emetụta ya na ndị ọrụ ga -enweta oge na -atọ ụtọ site n'ịrụ ọrụ ịkwụ ụgwọ.
Kwesịrị iji Instagram Checkout?
Ọtụtụ n'ime anyị ejirila ikpo okwu Insta maka ire ahịa na mgbasa ozi kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a., anyị makwaara mkpa ọ dị maka atụmatụ ahịa anyị.
Mana mgbanwe ndị mere n'afọ gara aga na -emezigharị ikpo okwu a kpamkpam.. Ọ kwesịghị ịbụ naanị ikpo okwu mgbasa ozi.
Njirimara ndenye ọpụpụ Instagram na -enye ndị ahịa anyị usoro dị mfe, site na nke ha nwere ike ịzụta ngwaahịa anyị.
Afọ a, Instagram nwara ịnabata azụmaahịa na ụdị ike ọ bụla site na ọrịa ọjọọ.
Ha chịkọtara ọrụ ụlọ ahịa n'ụwa niile wee wepụta koodu QR iji nyere anyị aka ịzụlite azụmahịa anyị na Insta.
Instagram kọrọ que 80 % des comptes suivent un compte d’entreprise, nke na -akọwa nke ọma ihe mere ha ji gbaa mbọ hụ na anyị nwere ike irite uru na ikpo okwu anyị.
Nke a bụ otu ndị ọrụ nwere ike isi zụta ngwaahịa anyị na usoro ole na ole dị mfe:
• Pịa na akara ngosi
• Pịa ngwaahịa gosipụtara
• Kpatụ ihe ndekọ ego
• Tinye nkọwa kaadị na ozi ịgba ụgwọ
• Pịa n'usoro ịtụ
Otu esi etinye akwụkwọ maka ndenye ọpụpụ Instagram?
Ị nwere ike iji ndenye ọpụpụ Instagram ugbu a na United States, mana ị ga -ebu ụzọ hazie ụlọ ahịa gị.
Ya mere ejikọtara akaụntụ gị na ibe Facebook gị ma ọ bụ gaa na Shopify, ebe Insta nwere ike weghachite katalọgụ gị na ozi ngwaahịa.
Insta na -eji ozi gị mepụta aha ngwaahịa gị ka ị nwee ike ịkpado ngwaahịa gị na foto gị, vidiyo na IGTV ugbu a.
Mgbe ịmechara ụlọ ahịa gị nke ọma, ị nwere ike iji fọm a ebe a ịrịọ maka ndenye ọpụpụ.
Ọ bụrụ na ịnọghị na United States, jikere ma mepụta ụlọ ahịa gị. Bido n'isi jiri ọrụ ịkwụ ụgwọ ozugbo ebibatara ya n'ụwa niile.
Otu esi enweta ihe kachasị na ndekọ ego gị
Anyị nwere aro ole na ole maka gị ka ị nweta ihe kachasị na njirimara ndenye ọpụpụ Instagram gị., na otu a, ị nwekwara ike hụ na ịbawanye ahịa gị.
1. Tụlee ịkpado ngwaahịa gị n'ụdị ọdịnaya niile
Akwụsịla aha mmado gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ahịa gị. Cheta mgbe niile ịkpado ngwaahịa gị n'ụdị ọdịnaya ọ bụla. Nweta ihe kachasị na foto na vidiyo.
Site na ịmepụta mkpado n'ụdị ọdịnaya dị iche iche, ị na -ahụ na ị rutere ọtụtụ mmadụ o kwere mee bụ ndị na -ele ọdịnaya gị.
Ka a na -ahụkwu ngwaahịa gị, ọ dịịrị ndị na -ege gị ntị mfe ịhụ ma zụta n'aka gị site na njirimara ndenye ọpụpụ.
2. Mmekọrịta na ndị na -eme ihe ike
Ndị na -emetụta ya dị ukwuu, ndị na -eso ụzọ ha na -enwekwa mmasị n'ebe ha nọ. Anyị kwesịrị inye ha otuto n'ihi na ha dị oke mma n'ihe ha na -eme.
Ọtụtụ n'ime ha enweela ihe ịga nke ọma n'ịnọgide na -emepe nyiwe nkeonwe ha site na itinye aka na imepụta ọdịnaya mbụ maka ndị na -eso ụzọ ha na -eguzosi ike n'ihe.. Nke a bụ otú ha si ebi ndụ, ya mere, ha ga -amatarịrị otu ihe ma ọ bụ abụọ.
Site na mmekorita ya na ndị na -eme ihe na ndị na -ejide akaụntụ okike nwekwara ike ịkpado ngwaahịa ozugbo na ọdịnaya ha, ị nwere ike kpọsaa ngwa ahịa gị nke ọma n'elu ikpo okwu ha, mana n'ụzọ ziri ezi.
Ọ bụghị naanị na ndị na -eso ụzọ ha ga -ahụ ngwa ahịa gị ngwa ngwa, mana ọ bụkwa ụzọ amamihe iji kpọsaa onwe gị, na -anwa ire ngwaahịa gị ozugbo.
3. Jiri carousels
Iji carousel maka ngwaahịa gị nwere ike iru ndị na -ege gị ntị ọsọ ọsọ, ma n'ụzọ dị irè. Ihe onyonyo nke ngwa ahịa gị na -amasị, ọ ga -adịrị gị mfe ịdọrọ uche ndị na -ege gị ntị.
Nwee okike ma jiri ụfọdụ ngwaahịa gị mepụta onyonyo. N'ụzọ nke a, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịkpado ngwaahịa ole na ole n'otu ọdịnaya, kamakwa iji tụọ ngwaahịa ndị a ọnụ yana ngwa ngwa.
Ọrụ ụlọ ahịa na ịkwụ ụgwọ na -agbanwe Insta ngwa ngwa ka ọ bụrụ nnukwu ikpo okwu karịa mgbe ọ bụla. Gbalịsie ike ka ị nọrọ na nche ma mata onwe gị maka atụmatụ niile dị adị na nke ewepụtara ọhụrụ..
Ndị otu Instagram arụsila ọrụ ike n'ime afọ ole na ole gara aga iji gboo mkpa na atụmanya gị, yabụ gbaa mbọ hụ na -erite uru zuru oke na uru niile ọ ga -enye.
Article précédentShoppingzụ ahịa IGTV dị ugbu a na Instagram
Article suivantNchekwa onwe dị ka Instagram: Bot Maka Mmasị akpaaka